Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » China na-eduga ụzọ na Global Green Economy
Na mbido Ọktoba, International Monetary Fund, na World Economic Outlook, belatara amụma uto zuru ụwa ọnụ nke 2021 na pasenti 5.9 wee dọọ aka ná ntị maka enweghị ntụkwasị obi dị ukwuu na mgbake akụ na ụba.
N'imegide ọnọdụ dị otú ahụ, ndị isi nke akụ na ụba 20 kasị ukwuu n'ụwa gbakọtara na Rome Italy na Satọde na-anwa ime ka ikpo okwu dị iche iche rụọ ọrụ ọzọ - dị ka o mere mgbe ha mere nnọkọ abụọ n'afọ n'otu oge ozugbo mbibi akụ na ụba ụwa 2008 gasịrị.
China, engine uto dị mkpa nke akụ na ụba ụwa, gosipụtara nkwado, nsonye na mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na Mgbakọ Ndị isi nke 16 nke 20 (G20).
Imekọ ihe ọnụ megide ọrịa na-efe efe
Ka COVID-19 ka na-emebi ụwa, Onye isi ala China Xi Jinping butere imekọ ihe ọnụ maka ọgwụ mgbochi ụwa mgbe ọ na-ekwu okwu site na vidiyo na nnọkọ mbụ nke nnọkọ ahụ.
Ọ tụpụtara atụmatụ mmemme Global Vaccine Cooperation Action Initiative nwere isi isii na-elekwasị anya na nkwado R&D ọgwụ mgbochi, nkesa ọgwụ mgbochi ziri ezi, ịhapụ ikike ikike ọgụgụ isi na ọgwụ mgbochi COVID-19, azụmaahịa dị mma na ọgwụ mgbochi, nnabata nke ọgwụ mgbochi na nkwado ego maka imekọ ihe ọnụ ọgwụ mgbochi ụwa. .
Ahaghị nhata na nkesa ọgwụ mgbochi ama ama, ebe mba ndị na-enweghị ego na-anata ihe na-erughị pasenti 0.5 nke mkpokọta ụwa yana ihe na-erughị pasenti 5 nke ndị bi n'Afrịka ka agbachara ọgwụ mgbochi zuru oke, dịka Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) siri kwuo.
WHO ewepụtala ebumnuche abụọ iji merie ọrịa a: ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ dịkarịa ala pasenti 40 nke ndị bi n'ụwa na njedebe nke afọ a wee mụbaa ya pasent 70 n'etiti 2022.
"China dị njikere iso ndị niile na-arụkọ ọrụ iji mee ka ohere na ohere nke ọgwụ mgbochi ọrịa na mba ndị ka na-emepe emepe ma na-enye onyinye dị mma n'iwube usoro nchebe ọgwụ mgbochi zuru ụwa ọnụ," ka Xi kwuru.
China enyela ihe karịrị ijeri 1.6 ọgwụ mgbochi maka mba 100 na otu mba ụwa ruo taa. Na mkpokọta, China ga-enye ụwa ihe karịrị ijeri ijeri abụọ n'ime afọ niile, na-ekwupụta na China na-emekọ ọnụ na mba iri na isii na-emepụta ọgwụ mgbochi.
Iwuli akụ na ụba ụwa mepere emepe
N'ịkwalite mgbake akụ na ụba, onyeisi oche ahụ kwusiri ike na G20 kwesịrị ibute ụzọ mmepe na nhazi usoro iwu macro, na-akpọ maka ime ka mmepe zuru ụwa ọnụ bụrụ nke ziri ezi, dị irè na nke gụnyere iji hụ na ọ dịghị mba ga-ahapụ.
"Akụ na ụba dị elu kwesịrị imezu nkwa ha na enyemaka mmepe gọọmentị ma nyekwuo akụ maka mba ndị ka na-emepe emepe," Xi kwuru.
Ọ nabatara ntinye aka nke mba ndị ọzọ na Global Development Initiative.
N'oge na-adịbeghị anya, ọ tụrụ aro Global Development Initiative na United Nations ma kpọkuo ndị mba ụwa ka ha mee ka nkwado dị ike na mpaghara nkwụsị ịda ogbenye, nchekwa nri, nzaghachi COVID-19 na ọgwụ mgbochi, ego mmepe, mgbanwe ihu igwe na mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mmepụta ihe, mmepụta ihe. dijitalụ akụ na ụba na njikọ.
Atumatu a dabara nke ukwuu na ebumnuche G20 na mkpa nke ịkwalite mmepe ụwa, Xi kwuru.
Ịrapagidesi ike na mmepe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Ka ọ dị ugbu a, ikwado mgbanwe ihu igwe dị elu na ebumnuche zuru ụwa ọnụ ka nnọkọ 26th nke Nzukọ Ndị otu (COP26) na UN Framework Convention on Climate Change ga-emepe na Sọnde na Glasgow, Scotland.
N'okwu a, Xi gbara mba ndị mepere emepe ka ha na-eduzi site n'ihe atụ na mbelata ikuku ikuku, na-ekwu na mba kwesịrị ịnakwere n'ụzọ zuru ezu ihe isi ike na nchegbu pụrụ iche nke mba ndị ka na-emepe emepe, na-emezu nkwa ha maka ego ihu igwe, na inye nkà na ụzụ, iwu ike na nkwado ndị ọzọ. mba ndị na-emepe emepe.
"Nke a dị oke mkpa maka ịga nke ọma nke COP26 na-abịa," ka o kwuru.
N'ọtụtụ oge, Xi akọwapụtala echiche China banyere ọchịchị ihu igwe zuru ụwa ọnụ ma gosipụta nkwado siri ike nke China na nkwekọrịta Paris, na-eme ka ọganihu dị ukwuu na ọkwa zuru ụwa ọnụ.
Na 2015, Xi kwuru okwu isi okwu na ogbako Paris maka mgbanwe ihu igwe, na-enye onyinye akụkọ ihe mere eme na njedebe nke nkwekọrịta Paris maka omume ihu igwe zuru ụwa ọnụ mgbe 2020 gasịrị.
Na mbido ọnwa a, o kwusiri ike na mbọ iji nweta oke carbon carbon na nnọpụiche nke China mgbe ọ na-ekwu okwu nzụkọ ndị isi nke nzukọ 15th nke ọgbakọ ọgbakọ nke ndị otu na Mgbakọ nke Diversity Biological.
Emere ọgbakọ G20 n'afọ a ma n'ịntanetị na offline n'okpuru ndị isi oche Italy, na-elekwasị anya na ihe ịma aka zuru ụwa ọnụ kacha emetụta, yana okwu metụtara ọrịa COVID-19, mgbanwe ihu igwe na mgbake akụ na ụba na-ebute ụzọ.
Emebere na 1999, G20 nwere mba 19 tinyere European Union, bụ isi ọgbakọ maka imekọ ihe ọnụ mba ụwa n'okwu gbasara ego na akụnụba.
Otu a ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ọnụ ọgụgụ ndị bi n'ụwa, ihe karịrị pasenti 80 nke Gross Domestic Product zuru ụwa ọnụ yana pasent 75 nke azụmaahịa zuru ụwa ọnụ.